LEGO NINJAGO Lloyd's Hydro Mech သည်တစ်ချိန်ကအလွန်ခြားနားခဲ့သည်
LEGO NINJAGO 71750 Lloyd's Hydro Mech သည်မူလကအလွန်ခြားနားသည်
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 210 Views စာ0မှတ်ချက် 71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mech, 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း, 71756 ရေအားလျှပ်စစ် Bounty, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, kai, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego Ninjago, လွိုက်, Niek van Slagmaat, Ninjago, NINJAGO ပင်လယ်ကြမ်းပြင်, ပင်လယ်ကြမ်းပြင်
အသစ်ဖြန့်ချိ Lego Ninjago 71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mech မူလကအချောအစုံ၏အရွယ်အစားထက်နှစ်ဆဖြစ်ပြီးလုံးဝကွဲပြားသောအရောင်ဖြစ်သည်။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနွေရာသီရဲ့ Seabound wave ရဲ့ ၀ င်ပေါက်အဆင့်ထုတ်ကုန်ဟာ Lloyd ထက် Kai ကိုပိုပိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာကြောင့်အနီရောင်ထက်အနီရောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ 71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mech သို့ Brick Fanatics ဒီနှစ်ကာလအတွင်းမှာ Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာဖြစ်ရပ်။
Niek က“ ငါပထမ ဦး ဆုံးပုံကြမ်းပုံစံကိုငါစလုပ်တုန်းကအဲဒါ Kai ရဲ့ mech ပဲ၊ အဲဒါကဒေါ်လာ ၄၀ ပဲ။ “ ဒါကြောင့်အဲဒါကနည်းနည်းပိုကြီးတယ်၊ အနီရောင်၊ ကဏန်းနဲ့တူတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ Seabound အစုံအားလုံးသည်စျေးနှုန်းအတော်အတန်တက်သွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ရှိသည် 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း နှင့် $ 130 71756 ရေအားလျှပ်စစ် Bounty [စျေးနှုန်းချိုသာသောအစုံများ] သည်အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းထက်နိမ့်ကြောင်းသေချာစေလိုသည်။
“ ငါတို့ကအဲဒါကိုဒေါ်လာ ၂၀ သတ်မှတ်ပြီးအဲဒါကိုပြောင်းလိုက်တယ်၊ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းတွေကြောင့်အဲဒါကို Kai's mech အစား Lloyd အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ကအဲဒါကိုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၊ ငါကအခြေခံအားဖြင့်ပုံစံငယ်ကိုလုပ်ရမယ်။
ပုံစံကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင်အခြားအချက်တစ်ခုရှိသေးသည်၊ စျေးနှုန်းတံဆိပ် (နှင့်နောက်ပိုင်းအရွယ်အစား) ကိုပြန်လည်ချဲ့ထွင်ရန်နှင့်ပိုမိုငယ်ရွယ်သောပရိသတ်ကိုလက်လှမ်းမီစေရန်တည်ဆောက်မှု၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုပြန်လည်လျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။
Niek ကရှင်းပြသည်။ “ ငါတို့မှာဒီထက်နိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းရှိရင်ငါတို့ကကလေးတွေကို ၀ င်ခွင့်ရအောင်အသက်နိမ့်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်အောင်အမြဲကြိုးစားတယ်။ Ninjagoအထူးသဖြင့်လက်ရှိဇာတ်လမ်းရဲ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Ninjago.
“ ဒါကြောင့်ဒေါ်လာ ၂၀ set ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါအဲဒီ့အစား ၇+ လေးတွေလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကအဲဒီကလေးတွေအတွက်တည်ဆောက်ခွင့်ပေးတဲ့ပုံစံကိုတော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေတယ်။ အဲဒါကတကယ်တမ်းတည်ဆောက်မှုမှာရော၊ ငါတို့သုံးဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အပိုင်းအစတွေမှာပါရှိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချို့အပိုင်းအစတွေကရှစ်နှစ်သားတွေထက်ခုနစ်နှစ်အရွယ်တွေအတွက်အသိအမှတ်ပြုဖို့ပိုခက်တယ်၊ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ တည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲ။ ”
မူရင်းပုံကြမ်းပုံစံမှအပဘာမှမကျန်တော့ဟုမဆိုလိုပါ 71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mech၊ အမာခံတည်ဆောက်မှုများနှင့်အရောင်များသည်မူလ Kai-themed mech မှပြောင်းလဲသွားနိုင်သော်လည်း၊ ဂဏန်းကဲ့သို့ဒီဇိုင်း၏စိတ်ဝိညာဉ်သည် Lloyd ၏အစိမ်းရောင်ရောစပ်မှုသို့ပြောင်းရာတွင်ပင်တသမတ်တည်းရှိနေခဲ့သည်။
Niek က“ ငါတို့သိမ်းထားချင်တဲ့အဓိကအရာကရေအောက်ဗေဒပါ။ ကဏန်းများသည်အခြားတစ်ချောင်းထက်ပိုကြီးသောခြေသည်းများရှိသည်။ မင်းကရန်သူကိုရင်ဆိုင်ဖို့လှည့်တဲ့အခါဘယ်လက်မောင်းကလေတိုက်တာကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကသံချပ်ကာကိုဆန့်ကျင်တယ်၊ အခြားလက်မောင်းကပေါ့ပါးတယ်၊ ဒါကြောင့်အင်အားနဲ့ဓားရဲ့အမြန်နှုန်းကလိုအပ်တယ်။ မင်းတိုက်တဲ့အခါ
“ စကတ်နဲ့ Kendo အလှအပတို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ဖို့ငါထင်တယ်။ ideasဒါပေမယ့်တကယ်ဖြစ်လာတာကိုငါအရမ်းပျော်တယ်။ ”
71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mech ကနေမှာယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com ယခု၊ အခြားအရာများနှင့်အတူ Ninjago ပင်လယ်ကြမ်းပြင်လှိုင်း။
ကြောင်းအလုပ်ထောက်ပံ့စဉ်းစားပါ Brick Fanatics သင်၏ ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ဤသီးသန့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုယူဆောင်ခြင်းနှင့်တူသည် Ninjago ငါတို့သုံးပြီးစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယိုရဲ့ The Vision?
အိုးမရှိ၊ LEGO အုတ်များတောင်မှမိုက်မဲစွာစျေးကြီးသည် →